हेर्नुस अचम्म ! यो बाटो पानी जहाज र हवाई जहाज हिँडेका कोही पनि जिउँदो फर्किएको छैन् – Namaste Host
April 26, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on हेर्नुस अचम्म ! यो बाटो पानी जहाज र हवाई जहाज हिँडेका कोही पनि जिउँदो फर्किएको छैन्
धेरै ठाउँ छन् जो रहस्यमय ठाउँ बनिरहेका छन् । यस्तै एउटा ठाउँ बरमुडा ट्रयाङगल छ,जसको नाम डेविल्स ट्रयाङ्गलको नामले बदनाम गरिएको छ । जहाँ कोही पनि जान चाहँदैन् । एट्लान्टीक महासागरमा रहेको बरमुडा ट्र्याङ्गल आफ्नो रहस्यहरुको कारण मशहुर छ । आजसम्म धेरै हवाई जहाँजहरु नांव बरमुडा ट्रयाङ्गलबाट बिलाउछन् वा हराउछन् ।यदि दोस्रो पटक मिले पनि क्रु मेम्बर्स पनि थाहा हुँदैन् ।
यस्तोमा केहि वैज्ञानिकहरुले भनेका छन् जहिले पनि यो हाइड्रा फाट्छ भने यसबाट फुट्ने बुलबुले पानीबो डीसिंटकम गर्छ र जसले गर्दा जहाज डुब्न जान्छ । ९४० बरमुडा ट्रयाङ्गललाई एलियंसको घर मानिन्छ र भनिन्छ यो ठाउँमा रहने एलियंसले आफ्नो प्लानेटसँग पनि जोडिएर रहन्छ । यसकारण यहाँ यति दुर्घटना हुन्छ । केही मानिसले यो पनि भन्छन् कियो क्षेत्रमाटाइम जोनान अनुसन्धानको लागि अमेरिकी एक धेरै ठूलो गोप्य प्रयोगशाला छ एलियन सँग जोडिएको अनुसन्धान गरिन्छ ।
९५० यो भित्र डाइरेक्सन बताउने कम्पासले काम गर्दैन् । त्यसको कारणले यहाँ दिशा पत्ता लाग्दैन् र यहाँ हराउछन् । कसैले यो पनि भन्छन् कि यो भित्र रहने एलियसको कारणले कम्पासले काम गर्दैन् ।